အီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်များသည်ထရပ်ကားများထဲသို့ထည့်သည့်လမ်းများသို့ | eReaders အားလုံး
အ အီလက်ထရွန်းနစ်ပြသမှုများ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင်နေထိုင်ရန်ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ကို eReaders များတွင်သာမက စမတ်နာရီများ၊ ထူးဆန်းသောစမတ်ဖုန်းများတွင်သာမက ယခုအခါ သြစတြေးလျလမ်းများပေါ်တွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာဘုတ်ကြီးများအဖြစ် တင်ဆောင်ရန်အတွက် ကုန်တင်ကားများပေါ်တွင် ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။.
ဤဆောင်းပါးကို ဦးဆောင်သည့် ဗီဒီယိုတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ထရပ်ကားအများအပြားသည် ၃၂ လက်မ အီလက်ထရွန်းနစ်မင်စခရင်ကြီးကို ထုတ်ဝေပြသရန် ၎င်းတို့၏ ခရီးရှည်ခရီးစဉ်များကို အများဆုံးအသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤကြော်ငြာနည်းသစ်ကို Mercedes-Benz နှင့် Visonect နှင့် RoadAds Interactive တို့က ဖန်တီးပေးထားသည်။
စခရင်များ တပ်ဆင်ထားပြီး လူတိုင်းနီးပါး အံ့အားသင့်စေပါသည်။ 4G၊ WiFi နှင့် GPS ချိတ်ဆက်မှုများကြောင့် ကြော်ငြာပြသခြင်းအပြင် ယာဉ်မောင်းသတင်းများကိုလည်း ပြသပေးပါသည်။အချိန်တိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော၊ မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်လျှင်ပင် ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့ယူဆရသည့် အတိုင်းအတာများကို လိုက်နာနိုင်စေရန် ၎င်းကို ပြသထားသည်။
ဤအီလက်ထရွန်းနစ်မင်စခရင်အမျိုးအစားများသည် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရော လမ်းပေါ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖြစ်အပျက်များကို သိရှိနိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရော ကြော်ငြာကြောင့် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဝင်ခွင့်ရရှိပုံကိုလည်း မြင်တွေ့ရသည့် သယ်ဆောင်သူများထံ ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤစခရင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ဘက်ထရီသည် ကြာရှည်ခံသောကြောင့် ရှုပ်ထွေးမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ထရပ်ကားများပေါ်တွင် တင်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် မင်စခရင်များမှတစ်ဆင့် ကြော်ငြာသည့်နည်းမှာ မည်သို့နည်း။. ဤဝင်ရောက်မှုအပေါ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်တွင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့် လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် မှတ်ချက်များအတွက် သီးသန့်ထားရှိသောနေရာ၌ သင့်ထင်မြင်ချက်ကို ပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » အီလက်ထရောနစ်မှင်ပြသမှုများသည်ထရပ်ကားများထဲသို့ထည့်ထားသောလမ်းများကိုထိမှန်ခဲ့သည်
ကြော်ငြာတွေက ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်၊ သင်ဘီးနောက်မှာရှိပြီး သင့်လမ်းမှာရှိနေတဲ့ ထရပ်ကားတစ်စီးကို ဖြတ်သွားတဲ့အခါ အရမ်းမလုံခြုံပါဘူး... အဲဒီထရပ်ကားရဲ့ panel နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အရှေ့ကင်မရာတစ်လုံးရှိဖို့က ပိုယုတ္တိရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျော်တက်ရန် နောက်မှယာဉ်။ အန္တရာယ်ကင်းသောလမ်း။
အမေဇုံက၎င်း၏ eReaders ၏ firmware ကိုအဆင့်မြှင့်သော်လည်းမည်သည့်အရာကိုယူရမည်ကိုမပြောပါ